Ince Capital မှ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ပြန်လည် ချေး ယူ - Pandaily
(Source: Ince Capital)
Ince Capital မှ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ပြန်လည် ချေး ယူ
Jan 07, 2022, 19:15ညနေ 2022/01/08 02:03:48 Pandaily
သောကြာ နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ကိုအာရုံစိုက် သည့် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး ကုမ္ပဏီ Ince Capital က ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း ၏နောက်ဆုံး ရန်ပုံငွ ေရှာ ပြီးစီး ခဲ့ $700 သန်းINCE Capital Partners II, LP (Fund II) နှင့် INCE Opportunities Fund, LP, INCE Capital Partners II ကို ကနဦး ရန်ပုံငွ ေရှာ ရည်မှန်းချက် ကျော်လွန် ပြီး $478 သန်း ၏နောက်ဆုံး အကောင့် အခြေချ နှင့်အတူ Oversubscribed ခဲ့ကြသည်: နှစ်ခု ရန်ပုံငွေ များအပါအဝင် ။ ယခုအချိန်အထိ Ince Capital မှ စီမံခန့်ခွဲ သော ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း သည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ခဲ့သည်။
Ince Capital အတွက် ရန်ပုံ ငွေကို Duke University, Carnegie Mellon University, Pittsburgh University, Kaiser Permanent Fund, Dietrich Foundation, Public Fund, Unicorn Capital, Axiom Asia နှင့် Siguler Guff အပါအ ၀ င် ထိပ်တန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် ပဒေသာပင် များ၊ ဖောင်ဒေးရှင်း များနှင့် မိဘ ရန်ပုံငွေ များသည် INCE Capital Partners ကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အားလုံးသည် INCE Capital Partners II တွင် ဆက်လက် လှူဒါန်း ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကတည်းက Ince Capital သည်ကြီးမားသော အလားအလာ များကိုပြသ သည့် ကုမ္ပဏီ ၂၄ ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး အချို့မှာ ကြံ့ ကုမ္ပဏီ များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာသည်။ Ince သည် စားသုံး သူ၊ နည်းပညာနှင့် ပလက်ဖောင်း စီမံကိန်း များကို အာရုံစိုက်သည်။
စားသုံးသူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း များတွင် စမတ် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် အမှတ်တံဆိပ် PETKIT ၊ ကလေး အစားအစာ အမှတ်တံဆိပ် Akita Manman ၊ Z မျိုးဆက် အဝတ်အထည် အမှတ်တံဆိပ် Beaster ၊ ကလေး အဝတ်အထည် တင်ပို့ သည့် အမှတ်တံဆိပ် PatPat ၊ ဒီဇိုင်နာ ကစားစရာ အမှတ်တံဆိပ် ToyCity နှင့် လက်လီ အရောင်းဆိုင် KK Group တို့ပါဝင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ကြီးမားသော ဒေတာ ကုမ္ပဏီ Zshield Inc. သည် Lenovo Capital မှ ဦး ဆောင်သော C ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ကိုရရှိ ခဲ့သည်
နည်းပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်း များတွင် အိမ်တွင်း သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် အမှတ်တံဆိပ် Zbeetle ၊ AI application platform Singularity System ၊ အဝတ်အစား ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် Flying Technology ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Yuanxin Technology နှင့် optical chip ကုမ္ပဏီ Mindsemi တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် Yuanxin Technology သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) တွင် စာရင်းသွင်း ရန် လျှောက် ထားခဲ့သည်။
Ince သည် အသိုင်းအဝိုင်း လတ်ဆတ်သော e-commerce NiceTuan ၊ အသင်း ၀ င် e-commerce ပလက်ဖောင်း BlackUnique နှင့် တပတ် ရစ် ဇိမ်ခံ လဲလှယ် ရေး ပလက်ဖောင်း Fat Tiger အပါအ ၀ င် ပလက်ဖောင်း အမျိုးအစား စီမံကိန်းများ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
Ince Capital မှပြောကြား ရာတွင် အစောပိုင်း အဆင့် မှ တိုးချဲ့ သည့် အဆင့် အထိ နည်းပညာ၊ အင်တာနက် နှင့် စားသုံးသူ စီမံကိန်း များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုဆက်လက် အာရုံစိုက် သွား မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကို တည်ထောင်သူ မိတ်ဖက် များဖြစ်သော JP Gan ၊ Hu Bin ၊ Stella Zhou နှင့် Paul Keung တို့က စီမံခန့်ခွဲ သည်။ ရှန်ဟိုင်း၊ ပေကျင်း၊ ဟောင်ကောင် နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့တွင် ရုံး များရှိသည်။
Tags Chinese technology companies | financing | ince capital | venture capital
ကြီးမားသော ဒေတာ ကုမ္ပဏီ Zshield Inc. သည် Lenovo Capital မှ ဦး ဆောင်သော C ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ကိုရရှိ ခဲ့သည်
တ႐ုတ္ အေျခစိုက္ စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ မႈ လုပ္ငန္း ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Zshield Inc. သည္ ယြမ္ သန္း ရာ ႏွင့္ခ်ီ တန္ဖိုး ရွိသည့္ စီ အလွည့္က် ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မႈ ၿပီးစီး ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ေၾကညာခဲ့သည္။
Sxsaw သည် A + Round Financing အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
Surface Acoustic Wave (SAW) filter ထုတ်လုပ်သူ Zhangjiagang Sxsaw Electronic Technology Co., Ltd. သည် ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်း) တန်ဖိုးရှိ A + ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး ပြီဟု အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Jan 11 ဇန်နဝါရီ 11, 2022
China VC အပတ်စဉ်: စမတ် ထုတ်လုပ်မှု, ချစ်ပ်, etc
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က VC သတင်းစကား တွင် Sequoia China နှင့် CATL သည် အသိဉာဏ်ရှိသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း AIMS တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။XiaopengLidar ကုမ္ပဏီ ငယ် တစ်ခုသို့ ငွေ သွင်း ပါ။
China VC Weekly: Harmay ‘s New Round နှင့် Sequoia’ s Fund အသစ်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အကျိုးတူ အရင်းအနှီး သတင်း တွင်တရုတ် အလှကုန် လက်လီ ကုမ္ပဏီကြီး HARMAY သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Sequoia Capital China Fund သည် အခြေခံအဆောက်အအုံ ရန်ပုံငွေ အသစ် ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Industry Jan 25 ဇန်နဝါရီ 25, 2022